တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ် သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာဒုံမြိ
ⓘ တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ် သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ရန်ကုန်ပြည်လမ်းမကြီးနှင့် ခရပင်လမ်းထောင့် အမှတ် ဃ တွင် တည်ရှိသော စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ် တစ ..
အော်ပရေးရှင်းပေပါကလစ်ပ် သည် တပ်မတော်စီအိုင်စီမှ အထူးအေးဂျင့်များက ပင်တိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် တွဲဘက်ထောက်လှမ်းရေးရည်မှန်းချက်များအေဂျင်စီ ၏ လျှို့ဝှက်လုပ်ငန်း တခုဖြစ်သည်။ ထိုစစ်ဆင်ရေးတွင် Wernher von Braun နှင့် သူ၏ V-2 rocket အဖွဲ့ကဲ့သို့ ဂျာမန်သိပ္ပံပညာရှင် ၊ အင်ဂျင်နီယာများ နှင့် နည်းပညာရှင်ပေါင်း ၁၆၀၀ ကျော်ကို ယူအက်စ်အစိုးရအလုပ်အကိုင်လုပ်ဆောင်ရန် ဂျာမဏီနိုင်ငံမှ အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ ၁၉၄၅ ခုနှစ်မှ ၁၉၅၉ ခုနှစ်ကာလအတွင်း ခေါ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ ထိုသူများစွာမှာ နာဇီပါတီ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းများ နှင့် အချို့မှာ ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများ ဖြစ်ကြသည်။ အော်ပရေးရှင်းပေပါကလစ်ပ်၏ ပင်မရည်ရွယ်ချက်မှာ ဆိုဗီယက်-အမေရိကန် စ ...
တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ် သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ရန်ကုန်ပြည်လမ်းမကြီးနှင့် ခရပင်လမ်းထောင့် အမှတ် ဃ တွင် တည်ရှိသော စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ် တစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြားသောအရပ်ဘက်ဆေးကျောင်းများနည်းတူ အမ်ဘီဘီအက်စ်ဘွဲ့သင်တန်းများ နှင့် ဘွဲလွန် သင်တန်းများ၊ ပါရဂူ သင်တန်းများကို သင်ကြားပေးလျက်ရှိသည်။ ထိုတက္ကသိုလ်မှ ဘွဲရရှိသည်နှင့် တပြိုင်နက် သင်တန်းသားများကို မြန်မာ့တပ်မတော်တွင် ဗိုလ်ရာထူးအဆင့်ဖြင့် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးသည်။ တပ်မတော်ဆေးမှူးများသည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ချို့တဲ့သည့် နိုင်ငံ၏ဝေးလံခေါင်ဖျားသည့် အရပ်ဒေသများတွင် တာဝန်ချထားခြင်းခံရသည့်အခါ ထိုဒေသရှိ တပ်မတော်သားများကိုသာမက အရပ်သားများကိုပါ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ကုသမှု ပေးရသည်။
တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ်ကို ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် Defence Services Institute of Medicine DSIM အဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မြန်မာ့တပ်မတော်တွင် ဆေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ဖြစ်သည်။ တပ်မတော်သည် တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ်ကို မဖွင့်လှစ်မီက အရပ်ဘက်ဆေးတက္ကသိုလ်များမှ ဆရာဝန်များနှင့် သွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များကို ခေါ်ယူတာဝန်ထမ်းဆောင်စေခဲ့သည်။ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသည် ဆရာဝန်များသည် စစ်တပ်တွင် အခြေခံစစ်ပညာရပ်များကို လအတန်ကြာ သင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့ရသည်။ ရှစ်လေးလုံးအရေးအခင်းပြီးသည့်နောက် တပ်မတော်မှ အာဏာသိမ်းပြီး စစ်တပ်အစိုးရ တက်လာသည့်အချိန် ၁၉၉၀ ခုနှစ် အစောပိုင်းကာလများတွင် ကျောင်းသားများ၏ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုများ မြင့်မားသည့်အတွက် အရပ်ဘက်ကျောင်းများနှင့် တက္ကသိုလ်များကို ကာလအတန်ကြာပိတ်ခဲ့ရသည်။ ထို့နောက် တပ်မတော်အတွင်း ဆေးမှူးလိုအပ်ချက်မှာ မြင့်မားလာပြီး ရှားပါးလာခဲ့သည်။
တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ်၏ ပထမဆုံးသော ဗိုလ်လောင်သင်တန်း အမှတ်စဉ် ၁ တွင် သင်တန်းသား ၄၇ ယောက်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ခြောက်နှစ်တာ စာပေသင်ကြားလေ့လာမှု၊ အလုပ်သင်ဆရာဝန်အဖြစ် တစ်နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးသည့်အချိန် ၁၉၉၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် သင်တန်းသားများအား "ဗိုလ်" အဆင့်ရာထူး ခန့်အပ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ အပတ်စဉ် ၉ အထိ တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ်မှ ဆေးမှူးအရာရှိ စုစုပေါင်း ၁၂၅၂ ယောက်နှင့် ပါရဂူဘွဲ့ရရှိသူ ၇ ဦး မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိ ဆေးပညာပါရဂူ ၄၈ ဦးနှင့် ခွဲစိတ်အထူးကုပါရဂူ ၄၁ ဦးအပါအဝင် ပါရဂူဆေးမှူးအရာရှိ ၃၃၅ ဦး မွေးထုတ်ပေးခဲ့သည်။
2. တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ခြင်း
2.1. တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ခြင်း သင်တန်းသားရွေးချယ်မှုစည်းမျဉ်းများ
အရပ်ဘက်ဆေးတက္ကသိုလ်များ​၏ ဝင်ခွင့်ရမှတ်ထက်မနည်း ဖြစ်ရမည်။
၂။ အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်များကို ဖြေဆိုရမည်
၁။ ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်၊ ရုက္ခဗေဒဘာသာရပ်၊ သတ္တဗေဒဘာသာရပ်နှင့်
ကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှု၊ အဖွဲ့အစည်းစိတ်ဓာတ်နှင့် ခေါင်းဆောင်မှုစိတ်ဓာတ်တို့အား စစ်ဆေးခြင်း
ကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှုစစ်ဆေးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းစိတ်ဓာတ်နှင့် ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်း၊ စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်း၊ အထွေထွေဗဟုသုတပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်း၊ လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းအပါအဝင် ဝင်ခွင့်ရွေးချယ်ခြင်းကို တပ်မတော်ဗိုလ်ရွေးအဖွဲ့တွင် ၅ ရက်မှ ၇ ရက်အထိ အချိန်ယူကာ စစ်ဆေးသည်။ စစ်ဆေးမှုများနှင့် အထက်ဖော်ပြပါ အဆင့်များအားလုံးကို အောင်မြင်စွာ ဖြတ်ကျော်ပြီးမှသာ တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသည်။ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသည့် သင်တန်းသားများသည် အရပ်ဘက်မှပေးအပ်သည့် ပညာသင်ဆုများနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိရ၊ အကျိုးခံစားခွင့် မရှိရပေ။